Amerika Latina · Janoary, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Janoary, 2012
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Janoary, 2012
Karaiba 31 Janoary 2012
Anio faha 16 Janoary 2012 izay andron'i Martin Luther King Jr no ankalazan'i Etazonia ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'ny lehiben'ny vondrona mpitandro ny zon'olombelona. Nandray anjara tamin'izany ny mpitoraka blaogy avy any Karaiba any an-tanindrazana sy any am-pielezana...
Lahatsary: Taona Iray Tontolo Iray Ary Tantara 52 Samy Hafa
Panamà 29 Janoary 2012
Hitsidika firenena irery mandritra ny herintaona ilay mpanao gazety amin'ny alàlan'ny Lahatsary Maggie Padlewska, hitety firenena iray isan-kerinandro ary mitontaly 52 ireo firenena hotsidihany amin'izany. Mandritra ny fitsidihany dia haka ary hamokatra lahatsarin'ny fifandraisany amin'ireo vondrom-piarahamonina, fikambanana ary olona zara raha voaresaky ny mpampita vaovao izy, ary hamoaka izany ao amin'ny aterineto izy.
Brezila 28 Janoary 2012
Kolombia: Hira Amin'ny Gadona Salsa Manakiana Ny Rafi-Pitaterana Aotobisy Haingam-pandeha
Kolombia 27 Janoary 2012
Hira amin'ny gadona salsa sy lahatsary iray no mitantara ny mafy iaretana izay ahafantaran'ireo mpampiasa azy ny fandehanana lavitra amin'ireo rafi-pitateram-bahoaka Transmilenio ao Bogota.
Nikaragoa 24 Janoary 2012
Venezoela: Fahazazàna, Dihy, Folklore… ary Fampielezan-kevitra
Venezoela 24 Janoary 2012
Nizara sarinà famerenan-dihy avy amin'ny alàlana tahirin-tsary ao amin'ny Facebook antsoina hoe "Venezuela dances to the tune of..." i Carmen Helena González. Arahanà fisaintsainana mampanontany ny fisian'ny fampielezan-kevitra ao anatinà seham-panabeazana.
Meksika: Mifanentana ny Mpiserasera Ho Fanampiana Ny Mponina Tarahumara
Meksika 20 Janoary 2012
Vaovao farany (18 Janoary, 2012): Nanohy hatrany ny fitantarana izay lazaina fa famonoan-tena nataon'ny mponina teratany Tarahumara ny Univisión. Ao amin'ny hafatra navoakany ao amin'ny pejiny Tumblr, nilaza izy ireo fa “nahazo vaovao mametraka fisalasalana momba izany filazalazana izany.” Nanamarika izy ireo na dia izany aza fa , “Ny loharanom-baovao voarain'ny Univision dia...
Goatemalà: Fampiasana Ankizy Any An-tsaha Fambolena Fary
Goatemalà 20 Janoary 2012
Ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetin'ny Plaza Publica tao Goatemalà no nahitana ny mpitondra ao amin'ny fitondrana, izay manana adidy araka ny lalàna hisoroka ny fampiasana zaza, mamela ny zaza latsaky ny 14 taona hiasa eny amin'ny saha fambolena fary, toerana ilana herintsandry sy mampidi-doza. Singam-pary navoakan'i Chris McBrien CCBy Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny...